धेरैले दाँत माझ्ने तरिका जान्दैनन् - डा.सुवास घिमिरेका यी टिप्स » RealPati.com
Tuesday, 17, August, 2021
धेरैले दाँत माझ्ने तरिका जान्दैनन् – डा.सुवास घिमिरेका यी टिप्स
काठमाडौं, वरिष्ठ दन्त चिकित्सक डा. सुवास घिमिरेले नेपालीहरुमध्ये करिब ९० प्रतिशतले उपयुक्त ढंगले दाँत माझ्न नजान्ने बताएका छन् । उपचारका लागि आएकाहरूको अवस्था हेर्दा दाँत सहि तरिकाले माझ्न नजानेर आएका समस्या धेरै देखिएको उनले बताए ।
डा.घिमिरेका अनुसार बालबालिकामा करिब ९० प्रतिशत र वयस्कमा करिब ६० प्रतिशतसम्म दाँत किराले खाने समस्याको एउटा प्रमुख कारण सही तरिकाले दाँत नमाझ्नु हो । यति मात्र नभई दाँतसम्बन्धी समस्याले नेपालीको औसत आयुमा समेत असर पारिरहेको छ ।
ओरल म्याक्जिलोफेसियल सर्जन डा. घिमिरे दाँतलाई सफा गर्ने विधिमा मानिसहरुले खासै ध्यान नदिएको बताउँछन् । ‘सर्वसाधारण, पढेलेखेका, विशेषज्ञ मात्र नभई चिकित्सकहरूलाई समेत उपयुक्त तरिकाले दाँत माझ्न आउँदैन । कुन टुथपेस्ट, कस्तो ब्रस प्रयोग गर्ने आदिबारे सोधेपनि ’बहुसंख्यक नेपालीले दन्त चिकित्सक नजिक पुग्दा दाँत माझ्ने विधिबारे सोध्ने गरेका छैनन् ।
दाँतलाई राम्ररी माझा कुल्ला, डेन्टल फ्लस आदि गर्दा करिब ६० प्रतिशत दाँतसम्बन्धी रोग हुनबाट जोगिन सक्ने डा. घिमिरे बताउँछन् । बिहान खाना खाएपछि र राति खाएर सुत्ने बेला गरी कम्तीमा दुई पटक दाँत माझ्नुपर्छ । एउटै ब्रस धेरै समयसम्म प्रयोग गर्नु उपयुक्त हुँदैन । दाँत माझदा फ्लोराइड भएको टुथपेस्ट उपयोग गर्नु उपयुक्त हुने उनको सुझाव छ ।
दिनहुँ न्यूनतम दुईदेखि तीन मिनेटसम्म ब्रस गर्नुपर्छ भने ब्रस गरेपछि जिब्रो सफा गर्न भने बिर्सनु हुँदैन । यसले मुखमा भएका किटाणुहरूको संख्यालाई कम गर्छ । ब्रसमा समेत ध्यान दिनुपर्छ । सामान्यतया धेरै कडा वा बढी नरम ब्रस उपयोग नगर्ने सल्लाह डा.घिमिरेको छ । कडा ब्रसले दाँत खिइने र नरम ब्रसले दाँत राम्ररी सफा नहुने हुँदा सामान्य व्यक्तिले न नरम, न कडा अर्थात् मध्यम लचकता भएको ब्रस उपयोग गर्नुपर्छ । मुखमा अनुकूल हुने हिसाबको ब्रस उपयोग गर्नुपर्छ । ब्रस गर्दा दाँत र गिजालाई न घोचिने गरी माझ्नुपर्छ ।
सबैभन्दा पहिले ब्रसलाई माथिल्लो दाँतअन्तर्गत गिजाको माथिल्लो भाग राखेर तल दाँततिर आउन दिने । यही प्रक्रिया दोहोर्‍याउने । यसले गिजामा रक्तसञ्चार हुनुका साथै दाँतलाई समेत बलियो बनाउँछ । यसपछि तल्लो दाँतअन्तर्गत तलको गिजाबाट ब्रसलाई माथि दाँतसम्म लिएर जाने । ब्रस तलमाथि गर्नु हुँदैन । दाँतको भित्री भागमा समेत यसैगरी सफा गर्नुपर्ने जनाउँदै डा.घिमिरे टोक्ने भागमा पनि ब्रसले अगाडि र पछाडि गरेर सफा गर्नुपर्ने उल्लेख गर्छन् ।
नेपालमा भेटियो कोरोनाको नयाँ भेरियन्ट : नयाँ भाइरस सबै उमेर समूहमा धेरै संक्रामक
गायक गौरब देउवाको आवाजमा ‘झ्याप बनायो ’ (भिडियोसहित)
दुई कोरियाबीच कोरियाली द्वीपमा रेलमार्ग निर्माण सहमति
मन्त्री अधिकारीलाई राजकीय सम्मान दिने सरकारको निर्णय, बिहिबार सार्वजनिक विदा
नेहा कक्कर नेपाल आउने
ताजा जनादेशमा जाने निर्णय अनुचित नभएको जनसमाजवादी पार्टीको माग
प्रदेश २ का प्रदेश प्रमुख मिश्रले लिए सपथ
एमाले स्थायी कमिटी र संसदीय दलको बैठक बस्दै
देशभर मौसममा बदली
पार्टी फुटाउने षड्यन्त्र क्षम्य हुँदैन् : अध्यक्ष ओली
त्रिशूली वाङ्गमय प्रतिष्ठानमा नयाँ कार्यसमिति चयन 52 views
नागपञ्चमी थिममा फेसियल हाउसको फोटो शुट 51 views
वर्तमान सकारले सुधारका लागि गर्नुपर्ने १५ काम 40 views
बाचुञ्जेल आफूले कमाएको केही सम्पति समाजसेवामा समर्पित गर्नेछु : ताराबहादुर कुँवर 20 views
Pakistani PM launches first phase of Single National Curriculum for students of grade 1 to513 views
आज २५६५ औँ बुद्ध जयन्ती मनाइँदै
‘सयकडा दश’को ‘दाईलाई कुरा लाइदिनी’ गीत सार्वजनिक
गायक प्रमोद खरेलको स्वरमा ‘ रुँदा सगैँ रुन्छु ’ (भिडियोसहित)
त्रिभुवन विश्वविद्यालयका रोकिएका परीक्षा आजदेखि